Olee otú naghachi furu efu photos / video si Kingston kaadị ebe nchekwa
Kingston kaadị ebe nchekwa mgbake: 3 iji fuo faịlụ azụ
Kingston bụ otu onye nke ụwa si eduga na kaadị ebe nchekwa manufactures na suppliers. Ya tumadi na-enye atọ di iche iche nke na ebe nchekwa kaadị ya bụ kọmpat Flash ma ọ bụ CF kaadị, Secure Digital kaadị maka foto na vidiyo na, na SD kaadị maka mobiles. Ha na-n'ọtụtụ ebe na site ndị nọ n'ụwa na ese foto na mobile igwe. Ya, "Enwere m ike naghachi mmadụ na mberede ehichapụ foto na vidiyo si m Kingston kaadị ebe nchekwa?" na-jụrụ ọzọ na ndị ọzọ ndị mmadụ.
Azịza ya bụ ee. Ị nwere ike naghachi foto na vidiyo furu efu ruru ka ihichapụ, formatting ma ọ bụ ihe ndị ọzọ si gị Kingston kaadị ebe nchekwa, ma e nwere otu ihe dị mkpa ka ị na-uche: Unu etinye ọhụrụ ọ bụla faịlụ gị Kingston kaadị ebe nchekwa mgbe ị na-ahụ ihe efu, ma ọ bụ nke furu efu faịlụ ga nwere ike overwritten, nke ga-eme ka Kingston kaadị ebe nchekwa mgbake ike.
1 Olee naghachi furu efu photos / video si Kingston kaadị ebe nchekwa
Akpa, ị chọrọ enyemaka nke a na kaadị ebe nchekwa mgbake ngwá ọrụ na-agbake furu efu faịlụ site na gị Kingston kaadị ebe nchekwa. Ọ dịghị mkpa ka anya gburugburu, na ebe a bụ nkwanye: Wondershare Photo Iweghachite, ma ọ bụ Wondershare Photo Recovery for Mac. Ha abụọ bụ ndị a pụrụ ịdabere na softwares na n'ụzọ zuru ezu na-akwado mgbake nke Kingston kaadị ebe nchekwa. Ị nwere ike naghachi faịlụ niile na gị Kingston kaadị ebe nchekwa gụnyere foto, vidiyo na ọdịyo faịlụ.
Download free ikpe mbipute a Kingston kaadị ebe nchekwa mgbake software n'okpuru, na-ewere ya maka free ugbu a.
2 Kingston kaadị ebe nchekwa mgbake: 3 iji fuo faịlụ azụ
Step1 Jikọọ gị Kingston kaadị na kọmputa
Jikọọ gị igwefoto ma ọ bụ ekwentị mkpanaaka na kọmputa na iji eriri USB, ma ọ bụ na-eji a kaadị agụ jikọọ kaadị ebe nchekwa gị ozugbo. Mgbe ahụ malite usoro ihe omume, na pịa "Malite" na isi interface dị ka ndị na-amalite Kingston kaadị ebe nchekwa mgbake.
Step2 iṅomi gị Kingston kaadị ebe nchekwa
Ọzọ, họrọ gị Kingston kaadị ebe nchekwa na-amalite ike iṅomi furu efu faịlụ na ya.
Step3 Preview na-agbake foto / vidiyo si na Kingston kaadị ebe nchekwa
Mgbe Doppler, niile recoverable photos, vidiyo na ọdịyo faịlụ na-hụrụ na-egosipụta. Ịnwere ike ihuchalu photos otu otu, na ego na-agbake faịlụ niile na otu Pịa.
Rịba ama: Unu ịzọpụta natara data na gị Kingston kaadị ebe nchekwa ọzọ. Chọta ebe ọzọ n'ihi na ọ dị ka na kọmputa gị ma ọ bụ ndị ọzọ na mpụga disk, maka nchekwa hà.
Olee otú Naghachi Lost Photos si emerụ nchekwa kaadị
Olee otú Naghachi-adịgide adịgide-ehichapụ faịlụ
Olee otú Naghachi ehichapụ ma ọ bụ formatted faịlụ site a Maxtor Draịvụ
> Resource> Naghachi> Olee naghachi Photos / Videos si Kingston Kaadị ebe nchekwa